silaanyo oo doonaya in uu xukunka ka dego iyo Amina Weris oo ku dhegsan by Abdi Mustafe‏
silaanyo oo doonaya in uu xukunka ka dego iyo Amina Weris oo ku dhegsan by Abdi Mustafe‏ 0 July 22, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 646
ilaanyo oo doonaya in uu xukunka ka dego iyo Amina Weris oo ku dhegsan by Abdi Mustafe‏
ilaanyo oo doonaya in uu xukunka ka dego iyo Amina Weris oo ku dhegsan by Abdi Mustafe‏ Muran dheer baa qoyskii soo dhex galay oo madaxweynhu leeyey anigu itaal aan xilkayga ku guto ma hayo iyo Amina Weris oo qandhadh ku ah xukunka oo le waad joogaysaa anagaa dalka wadayna.Waa waali.com
Marwadu yaanay ku seexan kuna soo toosin in ay madaxtooyada in badan sii joogayso. Time is up.
marka horena xal ma keento marka lagu soo kediyana qiiq baa ka baxa oo kelyo ay mucaaradka iyo madasha wax ku yidhaah daan ma helaan ee askar bay ku meerays taan. Waxa madaxtooyada ka dhacay shir qaatay 9 saacadood
oo meel isla dhigi kari waayay wixii loogu jawaabi lahaa mucaaradka sabab tuna tahay madaxtooyadu ma arin badna. Dowladani waxay doonaysaa inay hawaarto oo fadhido hadana qal-qaal keed ma hayso. Askarta ay heeganka geliyeen waa xaalad abuur ay doonayaan in dadka iyo dalka khal-khal lagu geliyo. Maxaaba keenay askar may miiska soo fadhiistaan oo sida ragga u doodaan. Heer askar lagu cararo weli lama gaadhin hase yeeshee marka shicibku bararugu askartu waxba qaban kari mayso oo iyagaa
qoryaha laga furan. Dowladu ha ogaato in maanta dub u laabasho jirin kol hadii labada xisbi meel kasoo wada jeedaan madashuna ku raacsantay.Somaliland aamus lagu xukumi maayo. Waxaa xaqiiq ah in dowladani cimrigeeda soo gaabinayso. Waxa soo if baxaya madaxtooyada oo qoyska Silaanyo isku heysto aynnu ka degno xukunka Silaanyo oon awood hayn darteed iyo marwada oo ku dhegsan. Hadaba isku soo xoori oo Silaanyo danbe oo dadka loo qarin karaa jiri maayo. Ha soo baxo oo ha hadlo kaduu caafimaad qabo.Abdi Mustaf No Comments yet... Print